प्रचण्ड र सीताले नै गरे बुहारी सिर्जना त्रिपाठीमाथि अन्याय ! – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, मङि्सर २०, २०७४०७:५७
काठमाडौँ । मान्छेको मरणमा सहानुभूति लिँदासमेत किन भेदभाव गरिन्छ ? आखिर मान्छे यतिविध्न कठोर कसरी बन्न सक्छन् ? के, कस्तो मन भएकाहरुले सधैं एकनाससँग नारीलाई अचानोमा पार्ने गर्छन् ?
यो प्रश्नले धेरै जनालाई सताइरहेको छ । प्रसंग उनै प्रचण्डपुत्र प्रकाशको असामयिक निधनको हो । र, विषय प्रचण्ड परिवारले वैधानिक, विवाहित बुहारी सिर्जना त्रिपाठीमाथि देखाएको विभेदकारी व्यवहारको हो । हाल उनी पोखरामा निर्वाचनका लागि खटिएकी छन् तर त्यहाँ प्रत्यक्षतर्फ माओवादी उम्मेदवार नै छैनन् ।
प्रकाश दाहालकी कान्छी पत्नी बीना मगर कञ्चनपुरबाट प्रत्यक्षतर्फ विजय हासिल गर्दैछिन् । उनलाई चाहिँ प्रचण्डको इज्जत, प्रतिष्ठाको विषय बनेको चिनवनमा लगियो । त्यहाँ काटिकुटी प्रकाशकै अनुहारको छोरासँगै आमा सिर्जनालाई पनि लगेको भए एउटा राम्रो सन्देश जाने थियो । तर, प्रचण्ड परिवाले त्यसो गर्नु आवश्यक देखेन ।
आफूलाई असाध्यै माया गर्ने ससुराको फोन कहिले आउला र सहयोगमा जुटौंला भनेर पर्खिरहनुपर्ने अवस्थामा आफैंले रोजेर, छमछमी नाचेर ससुराली गाउँबाट बकाइदा भित्र्याइएकी बुहारीलाई पुर्‍याउनुका पछाडि के छ कारण ?
चितवन लैजाँदा सिर्जनापट्टिको नाति र प्रकाशले पछि ल्याएको बुहारीको भागबण्डाको कुरा हो या सासु सीताको नसहने हठ मात्र यसका लागि जिम्मेवार छ ? प्रश्न के हो भने कान्छी बुहारी चितवन जाँदा जेठीलाई तालिका मिलाएर लान किन नहुने ? अहिले मान्छेहरु यहाँनेर पनि सीता दाहालले सन्तुलन नमिलाएको र छोराको मृत्यूपर्यन्त समेत बुहारीलाई न्याय दिन नचाहेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरजस्तो जिम्मेवार पदमा पुगेकी र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नमा निपूर्ण रेणु दाहालले पो यसतर्फ दुःखी आमालाई सम्झाइबुझाई गर्नुपर्ने हो कि ? जनआस्था साप्ताहिकमा राजकुमार रायले खबर लेखेका छन् ।
मतदातालाई बाँड्न बोकेको ३ लाख नगदसहित तीनजना पक्राउ
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको दशैं टिका, सर्वसाधारणको अनुहारमा निराशा !
तौल घटाउने तीन तरिका